छुटे ‘हामी यस्तै त हो नि ब्रो’ भिटेन
र्‍यापर समिर घिसिङ अर्थात् भिटेन रिहा भएका छन्। उनलाई बिहीबार प्रहरीले ललितपुरबाट पक्राउ गरेको थियो।
भिटेनले ‘हामी यस्तै त हो नि ब्रो’ मा अश्लील शब्द प्रयोग गरेको तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रहरी पोशाकमा गाँजा खाएको तस्बिर राखेको भन्दै पक्राउ गरिएको थियो।
उनको पक्राउ सँगै सामाजिक सञ्जालमा सरकारको व्यापक आलोचना भएको थियो। उनीहरुले सरकार नियन्त्रणमुखी बन्दै गएको भन्दै त्यस्तो सोच त्याग्न सुझाएका थिए। प्रहरीले उनलाइ बाबुकाे जिम्मा लगाएर तारेखमा रिहा गरेकाे हाे। उनलाई तारेखमा १३ गते उपस्थित हुने गरी अभिभावकलाई जिम्मा लगाइएकाे ललितपुरका एसपी दुर्गा सि‌हले बताए।
'भिटेन' पक्राउ परेपछि कसले के भने ?
र्यापर समिर घिसिङ (भिटेन )पक्राउ परेका छन् । ४ महिना अगाडी गाएको गीतमा अश्लिल शब्द प्रयोग गरेको भन्दै महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले उनलाई जाउलाखेलबाट पक्राउ गरेको हो । उनी पक्राउ परेसंगै र्यापर, गायक, तथा कलाकर्मीहरुले त्यसको बिरोध र समर्थन सामाजिक संजालमा गर्न थालेका छन् । हेरौ उनीहरुको बिचार जस्ताको त्यस्तै ।
मानस घले (र्यापर)
वाउ बधाई हो बधाई चोर हैन कलाकारहरु खोरमा थुन्दै बस्नुहोस् । हाम्रो सो कल्ड साथीहरु… पहिले समाज र नकारात्मक सामाजिक वातावरण चेन्ज गर्नुहोस् । अनि बल्ल कलाकारको कन्टेन्ट नि सकारात्मक नै आउछ ।
उत्साह युनिक जोशी (र्यापर)
वाक स्वतन्त्रता धरासई भएको छ । तर हो समाजले स्वीकार्ने बिषय बनाउनु पर्छ । गीतको माध्यमबाट तिमीले बोलेको कुरा सम्पूर्णको दिमागमा बस्छ । आश गरौ यो माहोलबाट भीटेन भाइ चाडै बाहिर आउन्।
प्रकाश न्यौपाने (र्यापर)
हजारौका बा आमा बेपत्ता पार्नेलाई चै जेल कहिले ?
दुर्गा पंगेनी (गीतकार)
लौ ओली सरकारले गीत संगीतलाई भने चोख्याएरै छोड्च क्याहो ? हाहा त्यो थाईल्याण्ड बाट हग्नकै लागि काठमाडौ आउछु भन्ने केटो पनि पक्राउ पऱ्यो रे !!
देउवा दाईले रुन पनि पाईन्न भनेको त सुन्याथेँ ! बद्री दाईले कम्युनिष्टको शासनमा ‘गीत गाउन पाईन्न’ भन्नुभाथेन क्यारे । भाईहरु झपाझप पक्राउ पर्दा कतै गीत संगीत नारान गोपाल युगमा फर्काउने योजना त होईन भन्ने संको पो परो त !
अँ.. ज्योती मगर लाई कहिले पक्रन्च होला ?
रवी रिमाल (गायक)
खुल्ला दिशा मुक्त देशको राजधानीमा हग्न आउछु भने पछी समाउदैन त ! भीटेन भाई पनि हो के !
गोकर्ण गौतम (समिक्षक)
दुनियाँमा कति अपराधी छन्, सरकार धमाधम गायक पक्रदैछ, दुर्गेस थापापछि र्यापर भिटेन पक्राउ ।
दुई तिहाईको नियत र औकात ।
सुब्रत राज आचार्य (फिल्म निर्देशक)
कति हास्नु !! सरकारलाई दुर्गेश र Vten हरुले समाज बिगार्दै छ्न भन्ने लागेछ
चर्चित र्‍यापर समिर घिसिङ (भिटेन) पक्राउ परेका छन् । अश्लील गीत गाएको आरोपमा उनलाई बिहीबार बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।भिटेनलाई महानगरीय अपराध महाशाखाले जावलाखेलबाट पक्राउ गरेको एसएसपी सहकुल थापाले जानकारी दिएका छन् । अश्लील गीतहरू गाएको आरोपमा पक्राउ गरिएको प्रहरीको भनाइ छ ।
केही दिनअघि मात्र तिहारको गीतमा गाँजा र रक्सी प्रमोट गरेको भन्दै प्रहरीले दुर्गेश थापालाई पक्राउ गरेको थियो । उनले सो गीत युट्युबबाट हटाउने सहमति जनाएपछि उनी रिहा भएका थिए । सो गीतमा गाँजा र रक्सीको शब्दमा बिप गरेर थापाले पुनः युट्युबमा राखेका छन् ।दुर्गेश थापालाई पक्राउ गरेपछि प्रहरीले भिटेनलाई पनि खोजिरहेको थियो ।